⚽အောက်စုံ အကွက်တွေလှနေတဲ့ EPL 3ပွဲ (ဂိုးမင်းသား) – the One Sports Journal
⚽အောက်စုံ အကွက်တွေလှနေတဲ့ EPL 3ပွဲ (ဂိုးမင်းသား)
♦ချဲလ်ဆီး – ဘန်လေ
ခြေစွမ်း ကစားအား အိမ်ကွင်းအားသာချက် ဒါတွေ အားလုံးက ချဲလ်ဆီးဖက်မှာ
ရှိပါတယ်။ ဒီလူစာရင်းခြေစွမ်းနဲ့ ဘန်လေကို အနည်းဆုံး 2ဂိုးသွင်းနိုင်မယ်လို့
အများစုမှျော်လင့်ထားပြီးသားပါ။ စျေးကလည်း (2+40)လေ။ ဂိုးပေါင်းစျေး
ကျတော့ (3+50) ဖြစ်နေတယ်။ စျေးအရ အပေါ်တစ်ကြောင်းပဲ ပေးအောက်မာ့်
အထာမျိုး။ ဒီလိုဘော်ဒီစျေးနဲ့ပဲ လီဗာပူးက အိမ်ကွင်းမှာ ဘရိုက်တန်ကို (2-2)
ကန်သွားတာ သတိပြုရမယ်။ လီဗာပူးလို အဆင့်2ကအသက်းက ဘရိုက်တန်လို
အဆင့် 8က ပသက်းကို (2+40) ပေးရင် ထိပ်ဆုံးက ချဲလ်ဆီးက အဆင့် 18 က
ဘန်လေကို (2+40) ထက် သေချာပေါက် ပ်ုပေးသင့်တယ် မထင်ဘူးလား?
အောက်စုံကို risk ယူချင်ပါတယ်။
♦ပဲလေ့စ် – ဝုလ်
မန်စီးတီးကို နိုင်ထားတဲ့ အရှိန်ရယ် အိမ်ကွင်း ရှုံးပွဲမရှိတဲ့ အချက်ရယ် ပေါင်းလိုက်ရင်
အခုပေါက်တဲ့ (=40) ထက်တော့ ပဲလေ့စ်ဖက်က ခပ်ရဲရဲ ပေးသင့်ပါတယ်။ ဝု်
အဝေးကွင်း ကစားအားရှိတာရယ် ပဲ့လေ့စ်ရဲ့ စျေးမရဲတဲ့အချက်ကြောင်​့ ဂိုးအောက်ကို
ပိုကြိုက်ပြီး အောက်စုံ ရွေးချင်တယ်။
♦ဘရန့်ဖို့ဒ် – နောဝစ်ချ်
တန်းတက်ချင်းတူပေမယ့် လက်ရှိခြေစွမ်းနဲ့ ရပ်တည်မှုအရ ဘရန့်ဖို့ပေးတဲ့ (1+30) က
စျေးပြင်းတယ်လည်း ပြောမရပါဘူး။ အောက်ဆုံးက နော်ဝစ်ချ်ကို အနိုင်ကစားပြီး
အနည်းဆုံး ပြား 30 တော့ ရမယ်ထင်တယ်။
♦ဘရိုက်တန် – နယူးကာဆယ်
ဘရိုက်တန်စျေးက ဆရာကြီးစတိုင်။ (1+20)။ ရသလောက်ယူမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေ
များအောင် လုပ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ ခြေစွမ်းနဲ့ ရပ်တည်မှုအရ မယှဥ်နိုင်ပေမယ့်
player တွေ ခေါ်ချင်ရင် တန်းဆင်းဇုန်ကနေ အထွက်တော့ပြရမယ့် နယူးကာဆယ်
ဖက်ကပဲ အများဆုံးပေးရရင် ပြား20 ပေးပြီး ရင်းကြည့်လိုက်မယ်။
⚽ေအာက္စုံ အကြက္ေတြလွေနတဲ့ EPL 3ပြဲ
♦ခ်ဲလ္ဆီး – ဘန္ေလ
ေျခစြမ္း ကစားအား အိမ္ကြင္းအားသာခ်က္ ဒါေတြ အားလုံးက ခ်ဲလ္ဆီးဖက္မွာ ရွိပါတယ္။ ဒီလူစာရင္းေျခစြမ္းနဲ႔ ဘန္ေလကို အနည္းဆုံး 2ဂိုးသြင္းႏိုင္မယ္လို႔ အမ်ားစုေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးသားပါ။ ေစ်းကလည္း (2+40)ေလ။ ဂိုးေပါင္းေစ်းက်ေတာ့ (3+50) ျဖစ္ေနတယ္။ ေစ်းအရ အေပၚတစ္ေၾကာင္းပဲ ေပးေအာက္မာ့္ အထာမ်ိဳး။ ဒီလိုေဘာ္ဒီေစ်းနဲ႔ပဲ လီဗာပူးက အိမ္ကြင္းမွာ ဘ႐ိုက္တန္ကို (2-2) ကန္သြားတာ သတိျပဳရမယ္။ လီဗာပူးလို အဆင့္2ကအသက္းက ဘ႐ိုက္တန္လို အဆင့္ 8က ပသက္းကို (2+40) ေပးရင္ ထိပ္ဆုံးက ခ်ဲလ္ဆီးက အဆင့္ 18 ကဘန္ေလကို (2+40) ထက္ ေသခ်ာေပါက္ ပ္ုေပးသင့္တယ္ မထင္ဘူးလား? ေအာက္စုံကို risk ယူခ်င္ပါတယ္။
♦ပဲေလ့စ္ – ဝုလ္
မန္စီးတီးကို ႏိုင္ထားတဲ့ အရွိန္ရယ္ အိမ္ကြင္း ရႈံးပြဲမရွိတဲ့ အခ်က္ရယ္ ေပါင္းလိုက္ရင္ အခုေပါက္တဲ့ (=40) ထက္ေတာ့ ပဲေလ့စ္ဖက္က ခပ္ရဲရဲ ေပးသင့္ပါတယ္။ ဝု္အေဝးကြင္း ကစားအားရွိတာရယ္ ပဲ့ေလ့စ္ရဲ႕ ေစ်းမရဲတဲ့အခ်က္ေၾကာင္​့ ဂိုးေအာက္ကို ပိုႀကိဳက္ၿပီး ေအာက္စုံ ေ႐ြးခ်င္တယ္။
♦ဘရန္႔ဖို႔ဒ္ – ေနာဝစ္ခ်္
တန္းတက္ခ်င္းတူေပမယ့္ လက္ရွိေျခစြမ္းနဲ႔ ရပ္တည္မႈအရ ဘရန္႔ဖို႔ေပးတဲ့ (1+30) က ေစ်းျပင္းတယ္လည္း ေျပာမရပါဘူး။ ေအာက္ဆုံးက ေနာ္ဝစ္ခ်္ကို အႏိုင္ကစားၿပီး အနည္းဆုံး ျပား 30 ေတာ့ ရမယ္ထင္တယ္။
♦ဘ႐ိုက္တန္ – နယူးကာဆယ္
ဘ႐ိုက္တန္ေစ်းက ဆရာႀကီးစတိုင္။ (1+20)။ ရသေလာက္ယူမယ္ဆိုတဲ့ သူေတြမ်ားေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ပုံစံျဖစ္ေနတယ္။ ေျခစြမ္းနဲ႔ ရပ္တည္မႈအရ မယွဥ္ႏိုင္ေပမယ့္ player ေတြ ေခၚခ်င္ရင္ တန္းဆင္းဇုန္ကေန အထြက္ေတာ့ျပရမယ့္ နယူးကာဆယ္ဖက္ကပဲ အမ်ားဆုံးေပးရရင္ ျပား20 ေပးၿပီး ရင္းၾကည့္လိုက္မယ္။
စနေည ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ (Super Zay)
စနေည လာလီဂါ ပစ်မှတ်များ ( ကိုရွှေမောင်း )
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ လူမုန်းအများဆုံးအသင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေရတဲ့ လီဗာပူး
ဖီးလ်ဂျုံးစ်ရဲ့ ခံစစ်ကစားခြင်းအနုပညာ ဖန်တီးခဲ့တာ ၇နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီ
ယူနိုက်တက်ဂန္ထဝင် ဆရာကြီးတွေကို တစ်ခါတည်း သတိပေးထားတဲ့ တန်ဟတ်
မန်စီးတီးရဲ့ ၂၀၁၂ အောင်ပွဲအပေါ် မေးခွန်းမထုတ်ကြတာ ရွန်နီအတွက် ထူးဆန်းနေ
ကိုက် ၈၀ အကွာကနေ တစ်ယောက်တည်းဆွဲပြေးသွင်းသွားတဲ့ ဟာနန်ဒက်ဇ်ရဲ့ Solo ဂိုး